Uyazi njani ukuba i-iPhone yeyokwenyani okanye ayiyonyani kwaye ayizukukhohliswa
Kuyenzeka ukuba uyazi ukuba i-iPhone yeyokwenyani okanye inkohliso ngandlela thile. Umnini angajonga i-IMEI (iSazisi seHlabathi seSoftware) okanye ajonge inombolo ye-serial kwiwebhusayithi ye-Apple. Ukongeza, kukho izinto ezibonakalayo ezinceda ukufumanisa ukuba ngaba isixhobo siyinyani okanye replica. Phakathi kwabo, isikrini, amatikiti kunye nelogo.
Nantsi indlela yokuxelela ukuba i-iPhone yinyani okanye hayi kwaye ungalahlekiswa.
Ngu-IMEI kunye nenombolo ye-serial
I-IMEI (isifinyezo kwisiNgesi xa Isazisi seQela leHlabathi leSelfowuniInombolo ekhethekileyo yokuchonga iselfowuni nganye. Ngokungathi sisazisi esisemthethweni. Asikho esinye isixhobo emhlabeni esiza kulingana.
Inombolo yesiriyali yikhowudi eyenziwe ngoonobumba kunye neenombolo eziqokelela ulwazi malunga nesixhobo, njengendawo kunye nomhla wokwenziwa, imodeli, phakathi kwabanye. Ngokubanzi, inokufumaneka kwiindawo ezifanayo njenge-IMEI.
Kwi-iPhone yoqobo, le datha iyafumaneka ebhokisini, kumzimba we-smartphone, nakwinkqubo yokusebenza.
Ukudlala kwakhona / iapile
I-IMEI kunye nenombolo ye-serial zikwibhakhowudi kwibhokisi yezixhobo. Qhubeka, iyakubhalwa IMEI okanye IMEI / MEID (1) e (S) Inani leNombolo (2), ilandelwe ngokulandelelana kwamanani okanye i-alphanumeric. Le imitya kufuneka ifane naleyo iboniswe kwimibuzo engezantsi.
Ukufumana i-IMEI ngenkqubo, landela nje umendo Useto → Ngokubanzi → Malunga. Skrolela ezantsi kwesikrini kude ufumane loo nto I-IMEI / MEID mi Inombolo yesiriyeli.
I-iPhone nganye inenombolo ye-IMEI ebhaliswe kwisixhobo ngokwaso. Indawo iyahluka ngemodeli. Uninzi lwazo, luyafumaneka kwi-SIM yetreyi.
Kwi-iPhone 6, i-iPhone 6 Plus, i-iPhone SE (isizukulwana sokuqala), i-iPhone 1s, i-iPhone 5c, kunye ne-iPhone 5, umxholo ubhalwe ngasemva kwe-smartphone. Inokufumaneka nje ngezantsi kwelizwi. iPhone.
I-ID yeenwele iApple
Ungafikelela kwiwebhusayithi ye-Apple ID ngayo nayiphi na ibrawuza ye-intanethi. Ngenisa nje iinkcukacha zakho zokungena uze uskrolele ezantsi kwicandelo Izixhobo. Cofa kumfanekiso wesixhobo ofuna ukufumanisa i-IMEI kwaye iwindow iya kuvula.
Ukongeza kwinani, ulwazi olufana nemodeli, uguqulelo, kunye nenombolo yesiriyeli ziyaboniswa.
Yiphedi yamaqhosha yeselfowuni
Enye indlela yokufumanisa i-IMEI kukuchwetheza * # amashumi amabini ananye # kwikhibhodi yesixhobo. Ulwazi luya kuboniswa ngokuzenzekelayo kwiscreen.
Ngenkonzo Jonga ukogquma (Jonga ukogquma)
I-Apple inewebhusayithi apho umsebenzisi anokujonga khona imeko yewaranti ye-Apple kunye nokufaneleka ukuthenga ukongezwa kwe-AppleCare. Ukwenza oku, kufuneka ufake inombolo yeselfowuni.
Ukuba i-iPhone ayisiyoyokuqala, ikhowudi ayizukubonakaliswa Ukuba konke kuhamba kakuhle, kunokwenzeka ukuba wazi ukuba usuku lokuthenga lusemthethweni kwaye ngaba inkxaso yezobuchwephesha kunye nokulungiswa kunye nokugubungela inkonzo kuyasebenza.
Inkqubo yokusebenza kunye nokusetyenziswa okufakiweyo
Zonke ii-iPhones zisebenza kuphela kwinkqubo ye-iOS. Oko kukuthi, ukuba uvula isixhobo kwaye iyi-Android, isixhobo ngokuqinisekileyo asiyonyani. Nangona kunjalo, oomgunyathi bahlala besebenzisa izixhobo ezilinganisa ukubonakala kwesoftware ka-Apple.
Kwiimeko ezinjalo, kuya kufuneka ujonge ukuba ngaba ifowuni inezicelo ezizodwa, ezinje ngeVenkile yeApple, isikhangeli seSafari, umncedisi weSiri, phakathi kwabanye. Ukuphelisa ukuthandabuza, ungajonga uguqulelo lwe-iOS kuseto.
Ukwenza oku, landela umendo Useto → Ngokubanzi → Uhlaziyo lwesoftware. Kulapho, umsebenzisi ujongene nenkqubo kunye nolwazi malunga nayo, njengezixhobo ezihambelanayo kunye neendaba.
Eli cebiso lisebenza ngakumbi kwabo bathenga i-iPhone yesibini. Ngamanye amaxesha umsebenzisi wokuqala angonakalisa isikrini kwaye ayibuyisele engeyo-Apple okanye inkampani eqinisekisiweyo.
Kodwa yintoni ingxaki ngokusebenzisa Iliso engenayo eyokuqala? Imiboniso engeyiyo eye-Apple inokubangela ukungqinelana kunye nemicimbi yokusebenza, utshilo umenzi. Oku kunokuthetha iimpazamo kwifayile ye- ukubamba Okuninzi, ukusetyenziswa kwebhetri ephezulu, ukubamba ngokungazibandakanyi, phakathi kwezinye iingxaki.
Ukusuka kwi-iPhone 11 kunokwenzeka ukuba ujonge imvelaphi ngenkqubo. Ukwenza oku, landela umendo Useto → Ngokubanzi → Malunga.
Ukuba uyabona Umyalezo obalulekileyo kwiscreen. Akunakwenzeka ukuqinisekisa ukuba le iPhone inesikrini sokuqala se-Apple, ukutshintshwa kwentsusa kusenokwenzeka ukuba khange kusetyenziswe.
Ezinye izinto ezibonakalayo
Ezinye zeempawu zomzimba wesixhobo zinokubonisa ukuba ngaba i-iPhone iyinyani okanye hayi. Ke ukuba ucinga ukuthenga isixhobo seApple, kubalulekile ukuba wazi ezinye iinkcukacha.
Ukusukela nge-iPhone 7, iApple ayisebenzisanga i-headphone jacks kwii-smartphones zayo, ezaziwa ngokuba yi-P2. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba usebenzise kuphela abo banesixhobo sokudibanisa umbane, esifanayo nesivumela ukuba uvuselele i-smartphone yakho. Okanye iimodeli ezingenazingcingo, ezidityaniswe ngeBluetooth.
Ke ukuba uthenge i-iPhone entsha ene-jackphone eqhelekileyo, isixhobo asiyonyani.
Zonke ii-iPhones zine logo eyaziwayo yeApple ebekwe ngasemva kwisixhobo. Kwimvelaphi, xa umsebenzisi eslayida i icon, abaqapheli mahluko okanye isiqabu ngokunxulumene nomphezulu.
Ngaphandle kokuchacha ngakumbi nangakumbi, kunzima kubavelisi beempendulo kunye nezinto zomgunyathi ukuvelisa olu hlobo lokuvela. Ke ngoko, umphumo uhlala unomsantsa phakathi komphezulu kunye nomfanekiso we-Apple.
Hlala ubukele ezinye iinkcukacha
Ngesixhobo esisesandleni, kunokwenzeka ukuba uthelekise inkangeleko yaso kunye nenkcazo eyenziwe kwiwebhusayithi yeApple. Jonga iinkcukacha ezinjengemibala efumanekayo kuloo modeli, indawo yamaqhosha, iikhamera kunye nokukhanya, phakathi kwabanye.
Inkampani ide ichaze nohlobo lokugqiba. Njenge "matte eyenziwe ngeglasi, enesakhelo sensimbi esingenasici esijikeleze isakhelo," kwimeko ye-iPhone 11 Pro Max.
Jonga kwakhona amandla afumanekayo kwimodeli nganye. Ukuba ubonelela nge-128GB ye-iPhone X, lumka, emva kwayo yonke loo nto, uthotho lunokukhetha kuphela nge-64GB okanye i-256GB.
Yintoni i-iPhone engenayo
Iifowuni azinayo imisebenzi eqhelekileyo kwii-smartphones ezivela kwezinye iimveliso. Izixhobo ze-Apple azinayo ithelevishini yedijithali okanye ii-eriyali ezibonakalayo. Kananjalo abanayo idrowa yamakhadi ememori okanye i-sim ezimbini.
Ingqwalaselo: iimodeli ezinje nge-iPhone XS, i-iPhone XS Max, i-iPhone XR okanye kamva zinomsebenzi wokulinganisa kabini. Ngaphandle kokuba nesithuba esinye se-chip enye, kusetyenziswa ikhadi le-nano-SIM kunye ne-e-SIM khadi, eluhlobo lwedijithali lwe-chip.
Lumkela amaxabiso asezantsi kakhulu
Kubonakala kucacile, kodwa xa isithembiso silunge kakhulu ukuba singayinyani, kubalulekile ukukrokrela. Ukuba ufumana i-iPhone ngexabiso eliphantsi kakhulu kwivenkile ethile xa kuthelekiswa namanye amaziko athembekileyo, krokra.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezinye izixhobo zentsusa zihlala zithengiswa ziinkampani ezinamaxabiso aphantsi kuba zibonisiwe okanye zihlaziyiwe, zikwabizwa ngokuba ihlaziyiwe. Ngokubanzi, iivenkile zinika ingxelo yokuncipha kwexabiso.
Umboniso we-iPhone, njengoko igama lisitsho, yenye ebibonisiweyo ixesha elithile. Oko kukuthi, khange ikhuselwe ekuphumeni kwaye inokuba namanqaku athile ngenxa yokunxibelelana kwabathengi okanye nabasebenzi.
Isixhobo esihlaziyiweyo sesinye, ngenxa yengxaki ethile, esibuyiselwe kumenzi saza iindawo zengxaki zatshintshwa. Ibhetri kunye nomva nazo ziyatshintshwa. Zithengiswa ngokubanzi ukuya kuthi ga kwi-15% kwaye zineziqinisekiso ezifanayo njenge-smartphone entsha.
Ungazi njani ukuba iphone yam ibuyisiwe
Kuyenzeka ukuba wazi nge inombolo yemodeli. Ukwenza oku, yiya ku Useto → Malunga. Ukuba inombolo yemodeli iqala ngonobumba METRO, kuthetha ukuba intsha. Ukuba uqala ngonobumba F, Ihlaziyiwe.
Ukuba ngethuba ubona ileta P, oko kuthetha ukuba yenziwe ngumntu. Ileta mantla ibonisa ukuba yanikwa yiApple ukubuyisela isixhobo esingalunganga.